Kọntaktị: Mee ka Network gị dịkwuo elu | Martech Zone
Mọnde, Febụwarị 24, 2014 Douglas Karr
Ijikwa mmekọrịta gị na atụmanya gị na ndị ahịa bụ ọtụtụ ọgụ mgbe a bịara n'ihe ijigide na nnweta. Ọ bụ ezie na nloghachi na ntinye ego bụ ihe dị egwu maka ndị ahịa anyị, na-enyere ha aka n'echiche, ndụmọdụ usoro okwu, yana ịbụ njikọ maka akụkọ ụlọ ọrụ, nyocha asọmpi, ndị na-ere ahịa ndị ọzọ na ndị na-achọ ọrụ na-abụkarị ihe dị mkpa ma baa uru na ha.
CRM ahụkarị nwere ikike idekọ ntụpọ otu gị - mana ọ bụchaghị ịchụpụ ụlọ na-edozi ahụ. Ebumnuche iji nyere ndị ahịa aka ịgbaso ndị ziri ezi, n'oge kwesịrị ekwesị, iji bulie mmekọrịta ROI site na njigide ka mma, nnweta na ntinye aka.
Atụmatụ nke Kpọtụrụ
Dashboard - Jikwaa ma soro ihe niile gbasara mmekọrịta gị na ụlọ ma hụ ihe ncheta na omume gị kwa ụbọchị ma mara nke ọma onye ịchọrọ ịgbaso kwa ụbọchị. Sochie mmekọrịta gị na ụlọ na-enwe ọganihu na kwa izu ọnụ ọgụgụ na mmekọrịta gị ọkwa otú ị maara kpọmkwem ebe ị kwụ.
Ihe ndebanye aha Email - Tinye kọntaktị gị na izipu ozi site na iji ndebiri arụnyere iji nye gị ohere idobe ozi gị kachasị dị irè n'aka maka mgbe oge ruru. Ogige ndị na-agbanwe agbanwe na-eme ka ndebiri iji mejupụta ozi gị na data nke ndị nnata gị.
Nkeji edemede - Tinye uru site na ịkekọrịta isiokwu site na iji Kọntaktị na-nchọgharị ngwá ọrụ iji dozie isiokwu, vidiyo, blog posts na saịtị ndị ọzọ na netwọk gị na ozi ahaziri iche.
Onye kere ihe mmalite - Mee mmeghe n’etiti ndị mmadụ na netwọkụ gị site na izipu nkọwa gị na data kọntaktị onye ọ bụla na nnabata abụọ n’otu oge.
AkaraMail - Zipu ozi ahaziri iche rue na kọntaktị 250 ahọpụtara site na iji ubi na ndebiri akpaaka. Tupu izipu, ịnwere ike ịgbakwunye ihe edeturu n'ime email ọ bụla maka imetụ onwe gị.
Programs - enye gị ohere ịhazi usoro omume na otu kọntaktị ma ọ bụ otu otu oge, ma ọ bụ na-akpaghị aka ma ọ bụ na nkwenye gị.
Pipelines - Jiri anya nke uche gị hụ azụmahịa gị ma kwado mbọ ị na-agba site n’igosi ọrụ ndị a rụrụ na paịpụ gị. Ngwaọrụ ahụ na - enye gị ohere iji anya nke uche hụ azụmahịa gị site na imeghe iji mechie dịka usoro gị ahaziri, ma gosipụta azụmahịa ndị nwere ike ịda site na mgbawa.
Njikwa kọntaktị - Mgbe ị debanyere aha maka ịkpọtụrụ, ị ga-ejikọ email gị, profaịlụ mgbasa ozi mmekọrịta na ama na nyiwe anyị. Nke a na-enye aka Kpọtụrụ iji mepụta ebe nchekwa data kọntaktị gị na-akpaghị aka maka gị n'enweghị ntinye aka ọ bụla n'akụkụ gị.
Ọrụ otu - Nyochaa onye ọ bụla na otu egwuregwu mgbe ọ bịara ịkpọtụrụ njikwa. Hụ otu kọntaktị ole onye ọ bụla na-arụ ọrụ na-ekekọrịta yana ole n'ime ha kpọtụrụla n'izu a.
Ọrụ otu - ekenye onye ọrụ gị kọntaktị ma naanị ya ga-enweta ọkwa na-esochi maka kọntaktị ahụ, na -emepụta ezigbo kọntaktị nwe.
Ekekọrịta bọket - Seamlessly jikọọ gị onwe gị na bọket gị otu bọket nke mere na gị kasị mkpa kọntaktị ndia na-mgbe-na-ụbọchị.
Tags: na kọntaktịCRMdomee crmgoogle +Isi mmalitelekọta anyandị ahịametụ isi
Feb 24, 2014 n’elekere 10:06 nke abali
Akwa post, Douglas! Ana m ekelekwa gị maka iwepụta oge iji dee ihe a!